လှိုင်းတို ရေဒီယို - ဝီကီပီးဒီးယား
လှိုင်းတို ရေဒီယို သည် ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတမျိုးဖြစ်ပြီး လှိုင်းတိုရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများ (SW) ကို သုံးသည်။ ထိုလိုင်းအတွက် တိကျသော လိုင်းအကျယ်ဟူ၍ သတ်မှတ်မထား။ သို့သော် ၃-၃၀ မဂ္ဂါဟက် (မီတာ ၁၀ဝ မှ ၁၀ မီတာ အကြား) လွှင့်နိုင်သော ကြိမ်နှုန်းမြင့်လိုင်း (HF)၊ ၃၀၀ ကီလိုဟက် မှသည် ၃ မဂ္ဂါဟက် လွှင့်နိုင်သော ကြိမ်နှုန်းလတ်လိုင်း (MF)၊ ၃၀-၃၀၀ မဂ္ဂါဟက် လွှင့်နိုင်သော ကြိမ်နှုန်းအလွန်မြင့်လိုင်း (VHF) တို့ကိုလည်း လိုင်းတိုဟုပင် သုံးတတ်ကြသည်။ 
လိုင်းတိုလိုင်းတွင်သုံးသော ရေဒီယိုလှိုင်းမှာ အိုင်ရွန်နိုစဖီးရား ခေါ် အိုင်ရွန်းစုလေထုလွှာရောက်လျှင် ကန်ထွက်ခြင်း၊ ထောင့်စောင်းခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သောထောင့်တခုခုဖြင့် လိုင်းတိုကို ကောင်းကင်သို့ လွှင့်လိုက်ပါက လိုင်းမိစေလိုသော အရပ်ဒေသသို့ရောက်အောင် ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသို့လုပ်သည်ကို ကောင်းကင်လှိုင်းသုံးထုတ်လွှတ်ခြင်း ခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် လိုင်းတိုသည် အလွန်ဝေးသော အရပ်ဒေသများသို့ ဆက်သွယ်ရာတွင် အသုံးဝင်သည်။ အသံလွှင့် တေးလွှင့်ဌာနများသည် လိုင်းတိုသုံးကာ ရပ်ဝေးဒေသသို့ ထုတ်လွှင့်လေ့ ရှိသည်။
အခြားအသုံးများမှာ စစ်ဘက်၌ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းလွန်ရေဒါအဖြစ်၎င်း၊ သံတမန်ရေး ဆက်သွယ်ရန်၎င်း၊ အပျော်တမ်း ရေဒီယိုဝါသနာရှင်များအနေဖြင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်၎င်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်လွှင့်မှုများအတွက်၎င်း၊ အရေးပေါ်ကိစ္စများကြေညာရန်၎င်း၊ (လေထုပေါ်ရောက်နေသော လေယာဉ်မှ မြေပြင်ရှိ လေဆိပ်တခုခုသို့) လေကြောင်းဆိုင်ရာ ခရီးဝေးဆက်သွယ်ရေးအတွက်၎င်း၊ ရေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးတွင်၎င်း အမျိုးမျိုး အသုံးချကြသည်။
↑ "Frequency or wave band allocations". Recommendations for Regulation of Radio Adopted by the Third National Radio Conference. 6–10 October 1924. p. 15.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လှိုင်းတို_ရေဒီယို&oldid=672177" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၁:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။